Impumelelo eku-inthanethi iqala nge-CXM | Martech Zone
Impumelelo eku-inthanethi iqala nge-CXM
NgoMgqibelo, ngoMeyi 4, 2013 ISonto, May 5, 2013 UGary Galvin
Ukuphathwa Kokuhlangenwe Nakho Kwamakhasimende kusebenzisa ubuchwepheshe ukuhlinzeka ngolwazi lomuntu siqu nolungaguquguquki kumsebenzisi ngamunye ukuze kuguqulwe amathemba abe ngamakhasimende wempilo yonke. I-CXM ifaka ukumaketha okungenayo, okuhlangenwe nakho kwewebhu okwenziwe kwaba ngokwakho, kanye nohlelo lokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende (i-CRM) ukukala, ukukala kanye nokuhlola ukuxhumana kwamakhasimende.
16% wezinkampani zikhona bakhuphula izabelomali zabo zokumaketha ezidijithali kanye nokwanda kwemali esetshenziswayo. Izinkampani ezingama-39% zandisa isabelozimali sazo sokumaketha ngokwabelana kabusha isabelomali esivele sikhona kube ukumaketha kwedijithali. Ngokusho kwalezo nezinye izibalo ezivela ku- Umbiko we-2013 ovela eNhlanganweni Yezinhlangano Zedijithali, amandla okubandakanyeka nokubuyiselwa kotshalomali lokumaketha online kudlula izinzuzo zangaphambili zokukhangisa kwendabuko njenge-TV, iphephandaba, amabhodi okukhangisa noma umsakazo. Ukwazi ukudala ukuzibandakanya kwe-1-on-1 namakhasimende, abazoba khona nabamanje, kuguqula umhlaba wokuthengisa nowokumaketha. Konke lokho kungenzeka nge-CXM.
Okhiye be-CXM Impumelelo
Ukuheha Amakhasimende Amasha Esizeni Sakho - Kusetshenziswa amasu wokumaketha angenisiwe, amakhasimende amasha azolethwa kusayithi lakho ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana, i-SEO, amabhulogi, ividiyo, amaphepha amhlophe, nezinye izinhlobo zokukhangisa kokuqukethwe.
Ukwenza Abavakashi Bewebhusayithi Yakho - Yenza umlayezo wakho uphile kumsebenzisi ngamunye ngokuqukethwe okwenziwe kwaba ngokwakho kusihambi ngasinye ngokuya ngokuziphatha kwabo. Lokhu ngeke kubenze babone kuphela umyalezo abawufunayo, kepha izinkampani ezisebenzise lawa maqhinga zibone ukukhula kwemali engenayo kanye ne-148% ebuyayo kutshalo-mali lwazo. Ukubhangqa lokhu ngomklamo osebenziseka kalula, osebenzisanayo necebo lokuqukethwe eliqinile futhi unesisekelo esiqinile sokufaka phakathi imizamo yakho yokuthengisa nokumaketha kusuka.
Kusetshenziswa i-Salesforce CRM - Izicelo zeCRM zisebenza njengehabhu kubo bonke ubuhlakani bamakhasimende, okwenza izinkampani zithathe imininingwane ebalulekile kuyo yonke imizamo yezentengiso futhi zenyuse ukusebenza kwemizamo yazo yokuthengisa.
Ukugcina Amakhasimende Namathemba - Ngomkhankaso wokubandakanya noma wokuthinta, ukusebenza kwamanje kwamakhasimende kuzothuthukiswa. Ukusetshenziswa kokuzenzakalela kokumaketha futhi kufaka phakathi amaklayenti amanje emizamweni yakho yokumaketha engenayo kuyizindlela zokuphumelela ekugcinweni kwamakhasimende.
Tags: 2013 umphakathi we-ejensi yedijithali uyabikaUmbiko wesoda ka-2013CRMukuphathwa kwesipiliyoni samakhasimendeukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimendecxmubuchwepheshe be-galvinumabhebhanaumphakathi wama-ejensi edijithaliI-SoDa
UGary Galvin ungumongameli nomsunguli we IGalvin Technologies - inkampani yewebhu neyesoftware e-Indianapolis, IN. Uqale inkampani ngombono wokuba nenkampani ebeka indinganiso yokuthi amaphrojekthi kufanele aphathwe kanjani ngendlela efanele. Ngokugxila kakhulu ekwakheni izinqubo zamaphrojekthi wesoftware nokuqinisekisa ukulethwa ngesikhathi naphakathi kwesabelomali, iGalvin Technologies ikwazile ukuba ngumholi embonini. UGary udabuka eDetroit, MI kodwa uyaziqhenya ngokubiza i-Indiana ekhaya nonkosikazi wakhe nezingane ezine.